Khasaarahii Weeraradii Srilanka oo kordhay - Ceelhuur Online
Home > Wararka Maanta > Khasaarahii Weeraradii Srilanka oo kordhay
Khasaarahii Weeraradii Srilanka oo kordhay
April 21, 2019 admin636
Silsilado qaraxyo oo gaaraya ilaa 6 qarax ayaa saakayto oo Axad ah lala beegsaday Hoteelo Casri ah iyo Kaniisado ku yaalla dalkaasi.
Ugu yaraan 185 qof ayaa ku geeriyootay, halka qiyaastii 400-kalena ku dhaawacmeen.
Weerarkaasi ayaa lala beegsaday dad ka qeyb galay Dabaaldegga Easter-ka ee dadka Kirishtaanka ah oo iyaga maanta Kaniisadaha ku qabanaya Munaasabad ay u dabaal degayaan maalinta ay u yaqaanaan “Easter Sunday services”.
Saddex ka mid ah qaraxyadaasi waxay ka dhaceen Kaniisado Katoolik, halka 3 kalena lala beegsaday Hoteelladda qaalliga ee kala ah: The Cinnamon Grand, Kingsbury and Shangri-La oo ku wada yaalla bartamaha caasimadda dalkaasi ee Kolombiya.
Qaraxa 1-aad ayaa la sheegay inuu ka dhacay Kaniisad ku taalla caasimadda, halka qaraxyadda kale ay dhaceen 30-daqiiqo gudahooda.
Labada Kaniisad ee kale oo lala beegsaday qaraxyadda ayaa ku kala yaalla Degmooyinka Negombo oo 30-KM u jirta Caasimadda iyo mid kale oo ku taalla Degmadda Batikaloa oo 250 KM dhanka Bari kaga toosan caasimadda dalkaasi ee Kolombo.
Sarkaal u hadlay Isbitaalka Batticaloa o ola hadlay Wakaalladda Wararka AFP ayaa sheegay in ka bdaan 30 qof laga daaweeyey dhaawaacyo ka soo gaaray qaraxyadaasi.
Afhayeenka Boliska dalka Sri Lanka, Ruwan Gunasekera waxa uu sheegay in la daad-gureeyey dadkii ku dhaawacmay qaraxyadaasi, waxayna Ciiddanka Ammaanka go’doomiyeen goobahaasi.
Waxaana socda baaritaano lagu ogaanayo kooxihii ka dambeeyey qaraxyadaasi oo u muuqday kuwo la soo abaabulay.
Ma jirto ilaa haddana koox sheegatay qaraxyadda manta ruxay Kaniisado iyo hoteelo ku yaalla dalka Sri Lanka.
Qowmiyadda Budhistaha ayaa ugu badan dalkaasi, waxaana jira qabaa’ilo yaryar oo ka soo kala jeeda Qowmiyadaha Tamiilka iyo Singaliiska.
Jubbaland oo u digtay Oday Dhaqameedyada
Bayle oo dhagax dhigay dhismaha xarunta 3aad ee Wasaaradda maaliyadda (Sawirro)
Sawiro:Shabeel Dad ku dhaawacay Wanlaweyn oo la dilay
October 5, 2017 Cali Yare
Al-Shabaab Markale Xalay Weeraray Afgooye